Mampiaraka toerana: Mampiaraka ao Brezila
Ireto manaraka ireto fiadiana ny tompon-daka amin’ny lalao baolina kitra any Brezila sy any amin’ny telo taona no hampiantrano ny lalao Olaimpika fahavaratra. Tsy ho ela ity firenena ity dia ho feno maro ny mpizaha tany sy ny mpanao fanatanjahan-tena. Mety ho be dia be ny Breziliana dia mandeha ny fifaninanana.
Ary ny tsara hanombohana ny borosy, ka mitady namana vaovao eto amin’ny firenena. Iray hafa azo atao amin’ny Fiarahana amin’ny any Estonia. ny lehibe indrindra zavatra Mampiaraka toerana. Ny haingana ny asa fanompoana niara-niasa tamin’ny orinasa marika. Ny tambajotra dia ny vaovao Mampiaraka toerana ho an’ny olona izay tsy vonona ny hanan-janaka. Tena mitombina ny hevitra hoe ny mpamorona ny asa fanompoana. Ao amin’ny tambajotra niseho ny Mampiaraka toerana ho an’ny fanatanjahan-tena mpankafy. Ao amin’ny tranonkala dia tsy maintsy milaza izay ekipa manohana, fa amin’ny ny fototry ity I. Amin’izao fotoana izao aho, nahita vaovao ny Mampiaraka toerana. Fa izao dia tsy misy olon-tsotra Mampiaraka toerana miaraka amin’ny mahazatra modely. Ny Mpamorona ny vohikala Mampiaraka, dia tonga teo amin’ny tany am-boalohany ny asa fanompoana izay mikoriana ao Londres. Aorian’ny fisoratana anarana ny mombamomba afaka. Manonofy mahita manan-karena sy ny vadiny, any Etazonia. Raha toa ka ny valiny dia ENY, avy eo. dia ho ny mpanampy ho an’ny fahatanterahan’ny ny nofy.
Ao Azia taorian’ny fihaonana amin’ny Aterineto fito-polo mpampiasa hamaky ary mety ho vaovao ny namany teo aloha. Mampiaraka ao Alemaina Androany aho dia te hampahafantatra ny vaovao Mampiaraka asa fanompoana ao Alemaina io ô. Izany fanompoana izany dia ny adiny iray. Androany aho dia te hampahafantatra anareo ny tranonkala izay specializiruetsya ny Aotrisy tokan-tena. Ao tsara tarehy ity firenena tena be iray. lehibe indrindra iraisam-pirenena Mampiaraka toerana eto amin’izao tontolo izao. Naorina tamin’ny taonjato farany, ny septambra tamin’ity taona ity, ity toerana sonia
← Portugal afaka Mampiaraka, Online chat ary kokoa - Velona ho Fitiavana. Ny fitiavana ny fiainana